အခမဲ့ LEGO Jurassic World Tesco တွင်ရုပ်ရှင်ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ 30382 Baby Velociraptor Playpen
05 / 11 / 2018 07 / 11 / 2018 ဂရေဟမ် 1704 Views စာ0မှတ်ချက် 30382 ကလေး Velociraptor ကလောင်, Jurassic World, Jurassic Worldဖြေ: Fallen Kingdom, Lego, Lego Jurassic World, Polybag
မည်သူမဆိုဝယ်ယူ Jurassic WorldTesco ရှိ Fallen Kingdom သည်ရလိမ့်မည် Lego Jurassic World 30382 ကလေး Velociraptor Playpen အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Lego ဒိုင်နိုဆောနှင့် / သို့မဟုတ် ပိုးအိစံ ပရိသတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့မိတ္တူကိုဝယ်ချင်လိမ့်မယ် Jurassic Worldဖြေ: Fallen Kingdom Tesco မှသုံးစွဲသူများသည် ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်အတူ 30382 Baby Velociraptor Playpen အခမဲ့ရရှိမည်။ ဒီသေးငယ်တဲ့အစုကလေး raptor နှင့်တည်ဆောက်နိုင်သောဝင်းပါဝင်သည်။ Blu-ray နှင့် DVD နှစ်မျိုးလုံးတွင်အခမဲ့အစုံပါရှိသည်။
အဆိုပါ ပိုးအိစံ Chris Pratt ၏ Owen သည် Blue နှင့် raptor ကလေးငယ်တစ် ဦး နှင့်ဆက်သွယ်နေသည့် flashback မြင်ကွင်းများမှလှုံ့ဆော်ခံရသည်။ အပေါ်အရောင် ပိုးအိစံ ဒိုင်နိုဆောသည်အပြည့်အဝစိုက်ပျိုးသောအပြာရောင်နှင့်ကိုက်ညီသည် 75928 အပြာရောင်ရဲ့ရဟတ်ယာဉ်လိုက်စား.
Jurassic World: Fallen Kingdom ကို Blu-ray, 4K Ultra HD နှင့် DVD များတွင်ယနေ့ထုတ်ဝေသည်။ 2015 ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ၌တည်၏ Jurassic WorldChris Pratt ၏ Owen Grady သည် Bryce Dallas Howard's Claire Dearing နှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိုက်သည်။ သူတို့နှစ် ဦး သည် Isla Nubla မှဒိုင်နိုဆောများအားကယ်တင်ရန်ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင်ကျွန်း၏မီးတောင်သည်မျိုးရိုးဗီဇဖန်တီးထားသော critters များကိုသုတ်သင်ရန်နှင့်သုတ်သင်ရန်မတိုင်မီဖြစ်သည်။
ဒါဟာပိုပြီးမကြာသေးမီကအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည် Lego Jurassic World အစုံ လာမည့်နှစ်တွင်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်.
← Jurassic Worldဖြေ - Fallen Kingdom ကိုဒီနေ့အိမ်မှာပုံစံမျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်
LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာ 40289 Diagon Alley သည် LEGO Store တွင်ရွေးချယ်ထားသောအမိန့်များအခမဲ့ဖြစ်သည် →